Wazviita — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndinoda mazvita kuna vose vakanyengetera kwatiri apo takanga rwavakaita vari kondinendi guru Africa. Ishe nenyasha akapindura vazhinji minyengetero ivavo, uye vaishandisa iwe pamwe nesu kuita matambudziko munyika nhanhatu dzakasiyana. Zviratidzwa rava ikozvino kuguma uye isu kuenda kumba manheru.
Taizorega kunzwisisa minyengetero yako mberi njodzi kufamba uye utano. Vashomanana vedu havana kunzwa zvakare zvakanaka uye tinoda kuti musha utano. Ndinotarisira vaiswe Blog kukuudzai zvose rwendo rwedu. Kusvikira ipapo isu tinokoshesa minyengetero yako
Daniel mtombosola • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:43 ndiri • pindura
kuvonga nokuda munyengetero manup zvakashandura alot shamwari dzangu pano kuMalawi
Moby • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:44 ndiri • pindura
Dai akauya Nigeria
Njerucathy • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:44 ndiri • pindura
Zvakaoma kudaro kuti tione uye kupupurira kuti uchigara hwenyu akadurura kuna Kristu. Rich ndiwo mubayiro wenyu… dai ngaakuropafadzei uye mhuri yenyu pamwe utano zhinji, ameni.
Bradleydmv • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:44 ndiri • pindura
Kristy Cothran • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:44 ndiri • pindura
Still achinyengetera. Tinotenda kuti kushinga kwako. Zviri kukurudzira vose. Video Blog uye kutiudza kuti zvinhu zvakanga Africa.
Rebecca • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:45 ndiri • pindura
Ya zvachose! vachinyengeterera yall chaizvo uye icharamba kuita kuti iwe usvike kumba.
Cera Ngunjiri • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:45 ndiri • pindura
Ndinonamata kuti iwe kuti ngozi kumba kwako:)neniwo tichivonga Mwari nokuda kwenyu, nokuti shoko Zvawava kupararira acros africa.u akasiya guru zvazvinoita pano muKenya U hav hapana idea.stay akaropafadza Triplee N fung 116clique
Josiah • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:45 ndiri • pindura
Nyengeterai kuti imi vakomana kuramba kusimbiswa sezvo imi vanomushumira, kunyange isu Paul kwakasimbiswa naJehovha (2 Tim 4:17). Chaizvoizvo akaropafadzwa nemi vakomana vari KE!
Boyd Lawrence Zimba • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:46 ndiri • pindura
Muri zvinoshamisa T)
Lusayo • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:46 ndiri • pindura
kuvonga nokuda kwedu muchikomborera wako kushanya fam.
Alexsakala • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:46 ndiri • pindura
Isu kuZambia akakomborerwa nemi vakomana